Fametrahana lamina ho fiadiana amin'ny fihanaky ny valan'aretina Covid-19 ao Analanjirofo | Primature
Mahazoarivo, 18 jona 2020 – Nanatanteraka iraka avy amin’ny Filohan’ny Repoblika tao Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Nisy araka izany ny dinika mikasika ny fivelaran’ny valan’aretina corona virus sy ny fametrahana rindran-damina ho fiatrehana izany niarahan’ireto iraka ireto sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao amin’ny Faritra Analanjirofo. “Ny fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoha dia mametraka hatrany ny tokony hisian’ny fifamenoana eo amin’ireo tompon’adraikitra eny ifotony sy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny governemanta amin’ny fitadiavana vahaolana”, ka izay no anton’izao dia izao hoy ny Praiminisitra.
Nisaotra ireo tompon’andraikitra eny ifotony ihany koa ny Praiminisitra, “tsapa fa modely ianareo amin’ny andraikitra izay nomena anareo satria tanteraka amin’ny antsakany sy andavany ireo toromarika nomena”. Na izany aza anefa dia mbola maro ireo ezaka tokony atao, satria ny fifindran’ny valan’aretina dia amin’ny alalan’ny fifampikasohan’ny samy olombelona ka mila mandray andraikitra bebe kokoa amin’ny fanentanana ny mponina hanaja ny fepetra izay misy ny tompon’andraikitra any an-toerana, ary ireo mpitandro ny filaminana dia tokony hanara-maso ny fivezivezen’ny olona na an-tanety na an-dranomasina.
Ho fiatrehana ny valan’aretina dia nitondra fanampiana toy ny tambavy CVO 50 000 fatra, aro vava 150 000, savony sy fitaovana fanasana tanana maro izay natokana ho an’ireo toerana ifamezivezen’ny olona (sekoly, hopitaly, biraom-panjakana,…) ny delegasiona ary nankinina amin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Faritra ny fitsinjarana izany ka ireo distrika izay voakasika amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina no atao laharam-pahamehana. Eo amin’ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana ireo marary indray kosa dia ataon’ny fitondram-panjakana ho laharam-pahamehana ny fampitaovana ny hopitaly, na amin’ny “Equipement de protection individuelle” (EPI) izany na ny fanafody ary nomena fanampiana manokana ny eny anivon’ireo “barrages sanitaires” ho fanamorana ny asan’izy ireo. Nohazavain’ny Praiminisitra ihany koa fa tsy ny olona rehetra no afaka tiliana fa ireo ahiana ho mitondra ny valan’aretina na misy ny soritr’aretina sy izay nifanerasera taminy ihany. Ezaka lehibe ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao ihany koa ny fananganana “laboratoire” iray ahafana manao PCR ao Toamasina izay manakaiky kokoa ny Faritra Analanjirofo
Eo amin’ny sehatry ny fahasalamana amin’ny ankapobeny kosa dia nambaran’ny Praiminisitra fa hatsaraina ny fitsaboana eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fametrahana hopitaly manakaiky vahoaka ka maro ireo CHU sy CHRD hatsangana manerana ny Nosy, ary hisy ny fampitaovana sy fampanarahana fenitra ireny toeram-pitsaboana ireny mba hamaly ny filàn’ny vahoaka.
Mikasika ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny indray dia nambaran’ny Praiminisitra fa “tsy ho ela dia ho tendrena ny governoran’ny Faritra Analanjirofo, saingy sarotra ny mitady olona mifanaraka amin’ny marimaritra iraisana ka tokony hanaiky izay olona voatendry eo ny rehetra ary ilay olona tendrena ihany koa dia tokony hikatsaka ny mahasoa ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny faritra”. Eo amin’ny fitondrana ny raharaham-panjakana indray dia tokony hanana toe-tsaina manalavitry ny kolikoly, ary mifototra amin’ny fahamarinana amin’ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra nankinina aminy ireo tompon’adraiki-panjakana tsirairay, hitondra vahaolana amin’ny fiadidiany izy ireo fa tsy ho fototry ny olana. “Na inona ezaka ataon’ny Filoham-pirenena sy izay tompon’andraikitra rehetra dia ho zava-poana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana raha tsy miainga amin’ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ary izany no fototra ahafahantsika mampandroso ny firenena sy manova ny tantara”, hoy hatrany izy. Nohamafisin’ny Praiminisitra fa mila rindran-damina ny fanatanterahana ny asa kasain’ny fitondrana hapetraka eny anivon’ny faritra. Noraisiny ho ohatra ny fananganana Oniversite ao Analanjirofo, ka nilazany fa “anjaran’ny ety ifotony no mijery ny toerana hanorenana izany”. Toy izany ihany koa ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa maro dia maro, toy ny ny fametrahana ny “Direction Régionale de la Sécurité Publique”, ny fametrahana commissariat, ny fananganana fitsarana sns… Nambarany ihany koa fa ataon’ny Fitondram-panjakana ho vaindohan-draharaha ny fanamboarana sy fanarenana lalana maro manerana ny Nosy ka voakasik’izany ny ny RN5, izay miainga ao Toamasina ka hatrany Antalaha.
Nandritra izao fihaonana izao ihany koa no niresahana mikasika ny seha-pihariana lavanila. Nambaran’ny Praiminisitra ary fa tsy maintsy diovina io sehatra io mba hisian’ny tena mangarahara, hahazoana tombotsoa mazava ary hametrahana hoavy mamiratra ho an’ny mpisehatra rehetra fa tsy sanatria ho atao sehatra hanjakan’ny mpanao ratsy amin’ny famotsiam-bola sy ny filalaovana vola maloto ny fandraharahana lavanila. Tafiditra ao anatin’izany ezaka fanadiovana izany ny fametrahana kaomisiona nasionaly iarahana amin’ireo mpisehatra handinika ny fiarovana sy ny fanatsarana ity sehatra ity. Eo ihany koa ny paikady manokana amin’ny fiarovana ny vokatra amin’ny halatra sy fandrobana na any an-tsaha na amin’ireo toerana fitehirizana ny vokatra, efa maro ireo mpangalatra sy mpividy halatra no tratra. Etsy an-daniny dia ilaina hoy ny Praiminisitra ny mitazona ny kalitaon’ny lavanila Malagasy mba hifanaraka amin’ny fenitra takian’ny tsena iraisam-pirenena ka hahatsara ny vidin’ny Lavanila avy eto Madagasikara, ka izay no antony tokony hanajana ny fotoam-piotazana takian’izany.
← Fanazavana ny drafitra marolafy hiatrehana ny hamehana
Corona virus : “Ao anatin’ny fiombonana sy ny fifamenoana, ary fandalana ny soatoavina Malagasy no iatrehantsika ny ady atao amin’ny valan’aretina” →